परीक्षा केन्द्र तोकिएको बारे त्रिविको अन्त्यतै जरुरी सुचना ! ‘परीक्षा केन्द्रसहित हेर्नुहोस् - Everest Dainik - News from Nepal
परीक्षा केन्द्र तोकिएको बारे त्रिविको अन्त्यतै जरुरी सुचना ! ‘परीक्षा केन्द्रसहित हेर्नुहोस्
काठमाडौं, चैत २८ । पछिल्ला दिनहरुमा नेपालमा कानून विषय पढ्ने विद्यार्थीहरुको संख्या बढ्न थालेको छ । यो बीचमा आगामी वैशाख २ गतेदेखि ३ वर्षे एलएलवी प्रथम वर्षको परीक्षा सुरु हुन गइरहेको छ ।
अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रक कार्यालय बल्खुले परीक्षा केन्द्रहरु सार्वजनिक गरेको छ ।
बाँकी वितरण तलको तालिकामा दिइएको छ–